Abaalmarinta Caddaaladda - Falal Argagix - Afduubkii duulimaadkii Pan Am ee 73aad
Afduubkii duulimaadkii Pan Am ee 73aad
Karaaji, Pakistan | Siteembar 5, 1986
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanku waxa ay bixinaysaa abaalmarin $5 Milyan oo doolar warka la xiriira oo keeni kara xarigga/ama in cadaaladda la hor keeno Waduud Muxamad Cabdulaahi Khaliil Xuseen Ar-Rahayaal, iyo Muxamad Axmed Al-Munawar – kuwaas oo la aaminsan yahay in ay dhamantood ka tirsan yihiin kooxda argagixisada ee Abuu Nidaal.
Iyada oo taagan dhulka gegida dayuuradaha ee Karashi, Baakistaan ayaa diyaaradda Pan Am oo ku jirta duulimaadkii 73aad ayaa la afduubay 6dii aroornimo ee bishii Siteembar 5, 1986 kaas oo ay geysteen kooxda Abuu Nidaal. 379 oo isugu jira rakaabka iyo shaqaalaha diyaaradda, 78 qof ayaa u dhashay Maraykanka kuwaas oo diyaaradda saarnaa markii la afduubay. Waxaa ka baxsaday shaqaalihii diyaaradda, taas oo diyaaradda ka dhigtay in aanay diyaaraddu duuli karin. Afduubayaashu waxa ay qabsadeen diyaaradda waxaana ay dalbadeen in la keeno duuliyayaal duuliya diyaaradda una duuliya afduubayaasha iyo rakaabkaba Qubrus. Intii uu socday afduubka, qof u dhashay Mareykanka ayaa lagu dilay albaabka diyaaradda. Markii uu afduubku dhamaaday, afduubayaashu waxa ay rasaas ku fureen rakaabka. Ugu yaraan 20 rakaab ah ayaa la dilay, in ka badan 100 rakaabka ahna way ku dhaawacmeen.
Xukuumadda Baakistaan waxa ay goobta ku xireen afar ka mid ah dadkii weerarka geystay iyadoo mar dambana qof shanaad oo gacan ka gaystay afduubka diyaaradda la qabtay oo la xiray. Dhamaan shanta qof oo ay ka mid yihiin afarta qof ee la xiray waxaa la soo taagay maxkamad, lagu helay dambiga laguna xukumay in lagu xiro Baaksitaan.
Bishii Siteembar ee 2001dii, Sayid Xasan Cabdalatiif Safariini, oo ka mid ah dadka shanta ah ee lagu helay dambiga argagixisada ayaa waxa xabsiga ka sii daayey dawladda Baakistaan. Mar dambana waxaa loo dhiibay FBIda oo maxkamad lagu saaray maxkamadda dawladda dhexe ee Mareykanka. 16kii Diseembar 2003dii safariini waxa uu ogolaaday heshiis uu dambiga ku qiranayo kaas oo uu la galay waaxda caddaaladda ee dawladda Mareykanka. 13kii Maajo 2005tii waxaa lagu xukumay 160 sano oo xarig ah.
Janaayo 2008dii, waxaa la soo sheegay in afarta argagixiso ee abaalmarinta khuseyso ay dawladda Baakistaan xabsiga ka sii daysey. Waduud Muxamad Xaafiz Al-Turki, Jamaal Siciid cabduraxiim, Muxamad Cabdullaahi Khaliil iyo Muxamad Axmed Al-Munawar oo maxkamadda degmada Kaloombiya ay ku eedeysay doorkii ay ku lahaayeen afduubka ilaa hadda lama ogsoona meel ay ku nool yihiin.
Macluumaad dheeraad ah, waxa aad ka heli kartaa Dadka la Doonayo Argagixisada.
Wadduud Muxamad Haafis Al-Turki
Muxamad Axmed Al-Munawar
Muxamad Cabdullaahi Khaliil Xuseen Ar-Rahayal